Yakanakisa Dry Batch Concrete Plant Manufacturer uye Fekitori |Macpex
Kurongedza kunoenderana nenharaunda, otomatiki yakavhurika yakavharwa modhi, hapana kusvibiswa;Profiled simbi ndiro welding inogamuchirwa, uye hapana chechipiri kutamiswa mutengo.
Yakasanganiswa sump, sheet chimiro, diki yekufambisa saizi, inogona kusangana nezvinodiwa zvekutakura midziyo.
Kudzora kwakangwara, kushandisa chiridzwa + PLC yakangwara kutonga, yakagadzikana sisitimu, yakakwirira kuyerwa kurongeka uye nyore kushanda.
Yakakura vhoriyamu batching muchina: hombe vhoriyamu yekuburitsa bhokisi kurodha hupamhi kuti uderedze kurodha kudzvanywa kweloader;Kaviri musuwo meshini, yakatsetseka isina kuvhara uye kushandiswa kunoshanda kwehopper vhoriyamu;Saizi yemusuwo inogadziridzwa kudzivirira jamming uye kuputika, uye simba chairo rakakwirira.Kuchengeteka kwakanaka.
Ichi chirimwa chinowedzera yakaoma kongiri zvinhu, mvura, uye zvekuwedzera mumusanganisi werori zvese kamwechete.Rori ipapo inotenderera, panguva imwe cheteyo ichibvongodza musanganiswa wakanyorova ndokuiendesa kwairi kuenda.
Iyo Macpex yakaoma musanganiswa kongiri yekusanganisa chirimwa inoyera jecha, matombo uye simende mumabatiki masisitimu, uye inoaburitsa mumusanganisi werori.Kazhinji mvura inodiwawo pakubata wozoburitsa nezvimwe zvinhu murori mixer pamwechete.
Iyo yakaoma batching system haina musanganiswa wakafanana sewet batching chirimwa.Dry batching zvirimwa zvinowanzoona misiyano yakawanda mukutsauka kwakajairwa kwesimba rekupwanya uye shanduko yemhando yekongiri kubva pamutoro kuenda pakurodha.Iyo yakaoma musanganiswa kongiri batching chirimwa inogona kushandiswa neakazara otomatiki control System.
● Kuisa nekukurumidza uye kushanda nyore, kwakanakira kutakura.
● Hapana chakakosha chinodiwa chenheyo uye yakaderera mutengo wekuisa.
● Kuderera kwekugadzirisa mari kunofananidzwa nekrete batching plant.
● Zvinyorwa: PMD80
● Chiyero chekugadzira: 80 m³/h
● Mabhini ekuchengetedza akaunganidzwa ari kuchaja: 4 x 25 m³
● Aggregate kuyera simba: 2400 ~ 9600 kg
● Conveyor bhandi widt: 800 mm
● Simende inorema simba: 600 kg
● Mvura: 46 m³/h
● Simba rose: 55 kW
● Kubudisa kureba: 3.8 m
● Imba yekudzora: 4 m
Zvakapfuura: HZS60 kongiri kusanganisa chirimwa
Zvinotevera: Belt conveyor mhando yeHZS90 kongiri yekusanganisa chirimwa